End of bisha, dabayaaqadii qowladda pachinko ee feature (xiliga soo kabashada, ama nolosha furan)
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ End of bisha, dabayaaqadii qowladda pachinko ee feature (xiliga soo kabashada, ama nolosha furan)
※ aha dhamaadka
qowladda pachinko Fadlan tixraac sida arrimuhu u ah warshadaha oo dhan, waxaan u malaynayaa in ay yihiin dad ka mid ah kuwo maqlay wararka xanta ah in maayo baxay. Dhab ahaantii, waa dhab. dhamaadka qowladda pachinko waa, in inta badan dukaamada, fadlan qabaa in muddada dib u soo kabashada. Xagga qorshaha waxqabadka ganacsiga cad, waxaa lagu sameeyo waqtiga sixitaanka finalka. (Waa haddii kooxda flip in, haddii aad ma aysan samayn wax badan loo sii daayo kubada ilaa wakhtigan, sidoo kale waxaa jira dhacdo in la dhimay.) _ X000D_ sida kharashka bedelka iyo advertising
Xintai in ay dhacdo qabtay waa, sida kharashka tan iyo bilowgii bishii lacagta la go'aamiyey. bedelka
Xintai sidoo kale mas'uul ka ah dhamaadka bisha ay tahay, qarashka tan iyo markii ay dhacday bilowgii bishii, waxa qadar in ciday ku iman doonaa dib u soo kabashada lagama maarmaan noqoto. Haddii aad u tagto si waafaqsan qorshaha, waxaan xitaa ma u baahan tahay in aad u badan oo xataa ka soo kabsaday ka dhamaado bisha, waxyaalaha pachinko waa wax xataa sida khamaarka waa kuwa furan. Iyadoo daawashada xogta
, madal ah heshay oo ka mid ah socodka iyo soo saarayaasha of sifooyinka, in dhamaadka, in lala ay waayo-aragnimo u gaar ah, iwm, ku dhuftay dhidibkii, maxaa yeelay, waxaynu go'aamin doona set ah, dabcan, soo lama filaan ah ama tegey, xaqiiqda ah in or've qaaday waa mid aad u badanaa ee dunida.
In daraaddeed qowladda pachinko, iswaafajin ugu dambeeya ee faa'iido qalliinka, ka 20 ka bil kasta, waxay bilaabeen inay adkayn dhidibkii, ama hoos u dejinta ee Horukon ah, galaan dib u soo kabashada nidaamka. Isagoo ka hadlayay sababta ay wakhtigan, waa 25-ka bil kasta ee dadweynaha guud, waxa uu noqon doonaa degdegga. Haddii ay jiraan mushaharka, haddii aan soo baxay, macaamiisha ii eryan badiyeen badan sida caadiga ah. In ka badan bilowgii bishii ama bartamihii, waa in ay u badan tahay igu caddaan ah.
Intaa waxaa dheer, xaqiiqda ah in i ceyrsaneysa waa yara badan intii caadiga ahayd, xataa haddii xaaladaha adag oo ka mid ah ciddiyaha iyo goobaha, iibka kor u yihiin, waxa ay awoodaan in ay kor u roon guud ahaan doonaa. Dhowr maalmood ka mid ah 25 maalinta aad for Hall ah, iibka aan faa'iido guud sidoo kale soo saaray sidoo kale sidoo kale, waxa uu noqonayaa in xaqiiqda ah in inta lagu guda jiro sidoo kale kasban ugu badan ee hal bil.
heerkee Xaqiiqada ah in labada kabashada waqtiga, sidaas iman lug dib u dhac ka soo qorshe ganacsi ee dukaan kasta, ha aslanba odhan, marka aad qaadatay arakayo weyn gadaashiisa qorshaha faa'iido guud, dib u soo kabashada Waxa kale oo ka mid ah width, oo idinka mid doonaa kordhinta dabcan.
dhamaadka bisha, ciddiyaha hagaajin iyo goobaha iyo sidoo, Haddii aad sugto muddo aad u dheer oo ku guuldareystay xitaa hal maalin, waxa wadada guud gool faa'iido mar dambe in si buuxda loo qaadi lahaa. In badan oo qorshaha hawlgalka qowladda pachinko ah waa dunida in uu yahay iibka, labada set qaali ah faa'iido guud.
sixitaanka la mid ah ciddiyaha, ayaa sidoo kale ka dhigan tahay in gelin go'an, marka la barbar dhigo bilowga bisha ama bartamihii, waa width ah ee lama filaanka ah ku noqdo dhamaadka yar oo bishii in la ogol yahay. Xataa in yar, si ay u kalsoonaan karo kabsaday, waa in ay isku dayaan in ay failure aan sixitaanka oo kaliya, aad xaalad nafsi ah oo dhamaadka dhinaca maamulka ee.
kaliya sababtoo ah, si ay u noqdaan oo dhan waxaa taagan xaalad la mid ah, waa macquul in ay mar. Si aad u habayn ku daran tahay oo kaliya a midab yar oo keliya oo heshay waa mid aad u wanaagsan. Shaxda waa saxayo ciddiyaha caadiga ah iyo Horukon sidoo kale, waxaa jira ganaax. Intaa waxaa dheer, Afyare, iwm, sidoo kale inay isbedel si fudud u dhigay badan oo ciddiyahana sixitaanka, taas oo ay fududahay in la filayo kubada baxay marka la barbar dhigo pachinko ah.
dhamaadka Afyare, marka la barbar dhigo pachinko ah, ee ciyaarta, aad weydo gargaar laakiin waxa uu sheegay in ay xaalad khasaari. Dhammaadka bisha si ay u iloobin xaqiiqada ah in ay tahay xilliga dib u soo kabashada, in la baaro haysa ujeedada, waxaa ka wanaagsan inuu u ciyaaro oo aan aad u badan sidoo kale ceyrsaneysa hit a. Waa width ee lama filaan ah uu noqdo dhamaadka yar oo bisha u noqon. Xataa in yar, si ay u kalsoonaan karo kabsaday, waa in ay isku dayaan in ay failure aan sixitaanka oo kaliya, aad xaalad nafsi ah oo dhamaadka dhinaca maamulka ee.
dhamaadka Afyare, marka la barbar dhigo pachinko ah, ee ciyaarta, aad weydo gargaar laakiin waxa uu sheegay in ay xaalad khasaari. Dhammaadka bisha si ay u iloobin xaqiiqada ah in ay tahay xilliga dib u soo kabashada, in la baaro haysa ujeedada, waxaa ka wanaagsan inuu u ciyaaro oo aan aad u badan sidoo kale ceyrsaneysa hit a.